भुक्तान गरिएको सर्वेक्षण अनलाइन - यो कसरी कार्य गर्दछ र तपाईं तिनीहरूलाई फेला पार्नुहुनेछ Ebuno
सशुल्क सर्वेक्षण अनलाइन
के तपाइँले पहिले भुक्तान सर्वेक्षणका लागि विज्ञापन देख्नुभयो तर जुन पूरा भए पछि केही पैसा मात्र तिर्ने निकास भयो? एबुनोमा हामी अनलाइन भुक्तानी गरिएको सर्वेक्षण प्रस्ताव गर्दछौं जसले राम्रो लाभांश दिन्छ, सामान्यतया दश मिनेट इनाममा दश क्रोनर पूरा गर्न। हामी २०१ 2017 देखी टाढा छौं र प्यानलिस्टहरूको लागि एक अद्वितीय प्लेटफर्म विकास गरेका छौं।
कसरी हाम्रो भुक्तानी सर्वेक्षण अनलाइन काम गर्दछ
तपाईंले हाम्रो सर्वेक्षणहरूको जवाफ दिन सुरु गर्नु अघि तपाईंले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको हाम्रो साइटमा खाता दर्ता गर्नु हो। यो एकदम छिटो जान्छ र तपाईं प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुँदा तपाईं सफा हुनुहुन्छ, सर्वेक्षणहरूको जवाफ दिनको लागि सजिलो हुन्छ। सर्वेक्षणहरू भर्नको लागि तपाईंले केही परिचयात्मक प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्दछ, तर हामी तपाईंलाई सँधै उपयुक्त सर्वेक्षणको साथ मिलाउन प्रयास गर्दछौं।
तपाईले सबै सम्पन्न सर्वेक्षणहरूको लागि पोइन्टहरू पाउनुहुन्छ र त्यसोभए तपाईं तिनीहरूलाई पैसामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं आफ्नो PayPal खातामा पाउनुहुनेछ। यो भुक्तान गर्न छिटो र सजिलो छ र यो केवल पैसा मात्र होइन तर तपाईले राम्रो कमाउन सक्नुहुनेछ यदि तपाइँले हाम्रो सर्वेक्षणहरूको नियमित रूपमा जवाफ दिनुभयो भने।
के बारे मा अनलाइन सर्वेक्षण सर्वेक्षण छन्?
भुक्तान गरिएको सर्वेक्षणहरू सम्भव सबै थोरै चीज हुन् र पहिलो प्रश्नहरूको उत्तर दिएर, हामी एबुनोमा निर्णय लिन सक्दछौं कि यदि तपाईं विशेष सर्वेक्षणको उत्तर दिन योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भने। हामी सधैं तपाईंलाई सर्वेक्षणहरू प्रदान गर्ने प्रयास गर्दछौं ताकि तपाईं नियमित पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। थप रूपमा, त्यहाँ विभिन्न चुनौतिहरू छन् जसले तपाईंलाई थप पुरस्कारका लागि अतिरिक्त पोइन्टहरू दिन सक्दछ।
सामान्यतया सर्वेक्षणहरू तपाईका साथ काम गर्ने ठाउँमा, जहाँ तपाईं बस्नुहुन्छ, तपाईंको उमेर र त्यस्तै आधारमा चयन हुन्छन्। सर्वेक्षणहरू कत्ति समय लिन्छ र तपाईं के इनाम प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईं प्रायः देख्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई लामो समयको आधारमा छनौट गर्न अवसर दिन्छ। जब यो सर्वेक्षणको बारेमा के हुन्छ, यो कुन कम्पनीले उनीहरूलाई प्रदान गर्दछ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। यो सामान्यतया तपाइँको ग्राहकको रूपमा बिभिन्न स्टोरहरू, कम्पनीहरू वा उत्पादनहरूको बारेमा सोच्नुहुन्छ। कम्पनीहरूले ती सेवाहरू सुधार गर्न सूचना प्रयोग गर्दछ।
पहिलो चरण जब एबुनोमा दर्ता हुन्छ तपाईको नाम, ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस् र पासवर्ड छनौट गर्नु हो। त्यसोभए तपाईले हामीबाट प्राप्त गरेको ईमेलमा दर्ता पुष्टि गर्नुहोस्। त्यस पछि, तपाईले के काम गर्नुहुन्छ, तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ, तपाईको परिवारको साधारण आय र अन्य प्रश्नहरूले तपाईको लागि उपयुक्त सर्वेक्षण छान्न मद्दत पुर्‍याउने बारेमा जानकारी भर्नुपर्नेछ।
त्यसोभए तपाईंले भर्खरको पेपैल ठेगाना भर्नुपर्नेछ जुन तपाईं आफ्नो इनामहरू तिर्न चाहन्छन् र यो पनि निश्चित हुन्छ कि पैसा ठीक हुन्छ। एकचोटि तपाईंले दर्ता पूरा गरेपछि, यसले दुईदेखि तीन मिनेट लिन सक्दछ, तपाईं सर्वेक्षणहरूको उत्तर दिन सक्नुहुनेछ।
कम्पनीहरूको विकासमा मद्दत गर्नुहोस्
जब तपाईं भुक्तान गरिएको सर्वेक्षण अनलाइन भर्नुहुन्छ, तपाईंसँग पैसा बनाउनको लागि मात्र अवसर हुँदैन, तपाईं कम्पनीहरूलाई विकासको लागि पनि मद्दत गर्नुहुन्छ। तपाईंको उत्तर कम्पनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ र तिनीहरूलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्दछ। कम्पनीहरूले हामीलाई Enubo मा बजार अनुसन्धान संचालनमा राख्छन्, जुन हामी त्यसपछि तपाईंलाई तिर्दछौं।
सर्वेक्षणहरू कम्पनीहरूलाई प्रभाव पार्ने उत्तम तरिका हो जुन तपाईं पहिले नै खरीद गर्दै हुनुहुन्छ वा सेवाहरू खरीद गर्दै हुनुहुन्छ। यो गाह्रो प्रश्न होईन र त्यहाँ प्राय जसो धेरै विकल्पहरू छन् जुन तपाईले रोज्न सक्नुहुन्छ, तपाईले विस्तृत उत्तरहरू विरलै लेख्नु पर्छ।
दुबै मोबाइल र कम्प्युटर मार्फत उपलब्ध छ
दुबै कम्प्युटर र मोबाइलमा हाम्रो उपलब्धताका लागि धन्यबाद, तपाई सर्वेक्षणमा भर्नु सक्नुहुनेछ जब यो तपाईको लागि उपयुक्त छ। यदि तपाईंसँग काममा जाने र जाने लामो समयको यात्रा छ भने, यस समयमा पैसा कमाउन सक्षम हुनु गलत छैन। समान लागू हुन्छ यदि तपाईंले लामो समयको लागि बसको लागि पर्खनु पर्छ भने।
अनलाइन भुक्तान गरिएको सर्वेक्षणहरूमा मैले कति कमाउँछु?
तपाइँ कति कमाईनुहुन्छ भन्ने बारे मा निर्भर गर्दछ जुन कुन सर्वेक्षणको बारेमा छ, केहि बढी तिर्दछ भने अरूले कम भुक्तान गर्छन्। हामीले माथि उल्लेख गरेझैं तपाईले एक सर्वेक्षणलाई सक्रिय रूपमा उत्तर दिनको १० मिनेट को लागी दश क्रोनरमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ, तर केहि सर्वेक्षणले राम्रो तलब दिन्छ। अन्य चीजहरूको माझमा, यो सर्वेक्षणको कठिनाईको डिग्रीसँग गर्नुपर्दछ र कुन कम्पनीले हामीलाई उत्तर दिन चाहने व्यक्तिहरू फेला पारेको छ।
एउटा कुरा निश्चितको लागि हो र त्यो यो हो कि अनलाइन सर्वेक्षणहरूको जवाफ दिन सजिलो र सुविधाजनक छ। थप रूपमा, यो सर्वेक्षणको लागि भाग लिन अधिक रमाइलो हुन्छ जब तपाईं यसको लागि भुक्तानी गर्नुहुन्छ। हामी एबुनो मा एक स्थापित, स्विडेनी कम्पनी हो ताकि तपाईं आफ्नो पैसा प्राप्त गर्न सधैं विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ।